Uhlala njani ukhuthazekile ukuba unciphise umzimba Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Uhlala njani ukhuthazekile ukunciphisa umzimba
Uqeqesho, amandla kunye nomonde. Ezi zezinye zezinto ozifunayo ukuze uhlale unomdla wokunciphisa umzimba.
Kwiintsuku zokuqala, oku kunokuba lula ukufezekisa, kodwa inyani kukuba, ngokubanzi, kuza ixesha xa ukulandela ukutya kuba ngumceli mngeni wokwenene.
Oku kunokuba nzima kubantu abaninzi kuba ukutyeba nokutyeba kakhulu akunasizathu sinye. Ngokubanzi, zisisiphumo sezinto ezininzi kubandakanya iimpazamo zokutya, ukukhetha ukutya okungafanelekanga, kunye nendlela yokuphila.
1 Zibekele usukelo olusengqiqweni
2 Iingcebiso zokuhlala ukhuthazwa ukunciphisa umzimba
Zibekele usukelo olusengqiqweni
Inqaku elibaluleke kakhulu, ukuba ufuna ukufumana imilo, kukuqala ukuseta iinjongo ezifanelekileyo zokulahleka kobunzima. Ukutya okuthembisa iziphumo ezingummangaliso kunokuba yingozi.
Kuya kufuneka ukholelwe ukuba ukunciphisa umzimba okukhuselekileyo kukhuselekile kwimpilo yakho. Utshintsho kwinkqubo yakho kufuneka lube ngokuthe ngcembe kwaye lusebenze.
Izinto ezifunekayo ukuze uhlale ukhuthazwa ukunciphisa umzimba zezi: umbutho, ucwangciso kunye nokugxila. Kukwabalulekile ukuhlonipha imikhwa, inkcubeko yokutya, umda kunye nomzimba womntu ngamnye.
Iingcebiso zokuhlala ukhuthazwa ukunciphisa umzimba
Qala utshintsho namhlanje. Akusayi kubakho xesha lililo lokuqalisa, utshilo utitshala. Kwakhona, inyathelo lokuqala lidla ngokuba lelona linzima, kodwa lelona libalulekileyo.
Impilo yakho yeyona asethi yakho inkulu, cela uncedo kugqirha ukuvavanya umfanekiso wakho weklinikhi kunye nesondlo ukuze akukhokele kwindlela otya ngayo.
Bandakanya imithambo yomzimba kwinkqubo yakho yemihla ngemihla. Ziya kukonyusa ukutya okunciphisa umzimba kwaye zikunike amandla angakumbi. Khetha umsebenzi oza kukunika uyolo, kuya kuba lula ukukulungela ukuqeqesha.
Ishedyuli kwaye uhlele ukutya kwakho, ifriji yakho, kunye nepryry yakho. Khumbula: ukutya okwenene kunempilo kwaye kukunceda ukunciphisa umzimba.
Ukuba unesiqhelo esiqhutywa, yenza amashwamshwam asempilweni ukuze uhlale usesandleni xa kufika indlala.
Thelekisa uthelekiso. Khumbula ukuba umzimba wakho wahlukile, ke neziphumo zakho ziya kuba njalo.
Kuphephe ukutya kakhulu. "Ukongeza ekubeni nzima ukuyigcina, bahlala benganiki zonke izondlo eziyimfuneko."
Khathalela iphupha lakho. Ukuphumla kubalulekile ukunciphisa umzimba kunye nokuziva ukhuthazekile.
Musa ukuthathela ingqalelo ukulahleka kobunzima kuphela komlinganiso wakho wempumelelo. Thatha imifanekiso uze ubhale phantsi imilinganiselo yakho. Inkqubela phambili yakho iya kuba lukhuthazo olukhulu lokuqhubeka.
Iingcebiso zokunciphisa umnqweno wokutya iilekese
Iprotheni yeSoy endaweni yokutya okuvela kwimvelaphi yezilwanyana